Xooga saar sidii mashruuca kululaynta Huozhou
Xarunta kuleylka ee Shanxi Huozhou Huozhou “saddex sahay iyo hal warshad” mashruuca dayactirka kululaynta, Sida waalka ayaa ka qeyb galay isbadalka mashruuca bishii Juun 2020, kaas oo “saddex sahay iyo hal warshad” loola jeedo bixinta biyaha, korontada, kululaynta iyo maaraynta hantida gudaha aagga qoyska ee shaqaalaha shirkadaha dawladdu leedahay (oo ay ku jiraan shirkadaha dhexe iyo kuwa dawladda hoose). “Saddex sahay iyo hal warshadood” kala-soocidda iyo wareejinta waxaa loola jeedaa shaqo maareyn oo leh siyaasad xooggan iyo xirfad-xirfadeed, dabool ballaaran iyo hawlgal aad u cakiran oo ay hay'adaha dawladdu (oo ay ku jiraan shirkadaha iyo machadyada cilmi-baarista sayniska) kala saaraan biyaha, korontada iyo maaraynta hantida kululaynta wuxuu ka shaqeeyaa aagga qoyska laga bilaabo shirkadaha dawladdu leedahay wuxuuna u wareejiyaa qaybaha xirfadda bulshada si ay u maareeyaan.
Sida valves -ka mashruuca kululaynta Huozhou ayaa inta badan siiya falfalliyo balanbaalis ah ,fiilooyin koronto .
Sawirka sahayda (1)
Habka isku xirka waalka balanbaalis korontada
Inta badan: nooca flange iyo nooca canjeerada; Xaaladda shaabadaynta ee waalka balanbaalis korontada inta badan waxaa ku jira shaabad caag ah iyo shaabad bir ah. Iftiinka signalka korontada ayaa soo baxaya inta lagu jiro furitaanka iyo xidhitaanka waalka balanbaalis ee korontada. Badeecada waxaa loo isticmaali karaa sidii waalka joogsiga iyo nidaaminta waalka nidaamka dhuumaha. Iyada oo la adeegsanayo furitaanka iyo xidhitaanka aaladda, marka korontada la gooyo, waxaa lagu shaqayn karaa gacanta iyada oo aan saamaynayn codsiga.
Mabda'a shaqaynta ee waalka balanbaalis korontada
Awoodda korontada ee shaqaysa sida caadiga ah waxaa ka mid ah: AC220V, AC380V, iwm Calaamadda soo -gelinta: 4 ~ 20mA, 0 ~ 10V iyo calaamadaha kale ee hadda daciifka ah. Ka dib markii jilaayaha korontada ee la hagaajin karo iyo usha waalka la isku xiro oo la khafiifiyo; U isticmaal tamarta korontada sidii xoogga wadista si aad u kaxayso saxanka waalka balanbaalis ee 0 ~ 90 ° wareegga dambe ee qeyb ahaan. Ka hel calaamadda 4 ~ 20mA nidaamka kontaroolka otomaatiga ee warshadaha si si sax ah loo xakameeyo heerka beddelka waalka, si loo gaaro qawaaniinta iyo xakamaynta xuduudaha baahiyaha kala duwan sida socodka, heerkulka iyo cadaadiska.
Astaamaha farsamada ee waalka kubbadda alxanka
1. Qaab -dhismeedka jirka waalka waxaa si wada jir ah loogu xardhay iyada oo aan lahayn dillaac dibadda ah.
2. Kursiga waalka wuxuu ka kooban yahay giraanta shaabadaynta PTFE iyo guga, kaas oo leh la -qabsi xoog leh cadaadiska iyo isbeddelka heerkulka oo aan ka soo bixi doonin wax dalool ah baaxadda isticmaalka.
3. Qaab-dhismeedka ka-soo-baxidda ka-soo-baxa ee jiridda waalka wuxuu ka kooban yahay hal PTFE gasket self sealing iyo hal O-ring oo ku yaal salka jirridda waalka, laba O-siddo iyo laba gaas oo PTFE ah si loo hubiyo in uusan daadan.
4. Maaddada ka timaadda waalka waxay la mid tahay ta dhuumaha, mana jiri doonto cadaadis aan kala go 'lahayn, bakhtiinta iyo wax -ka -beddelka dhul -gariirka iyo gaadiidka dhulka maraya.
5. Jidka waalka waa iftiin waana sahlan tahay in lagu diirsado.
6. Waalka kubbadda tooska loo aasay waxaa si toos ah loogu aasi karaa dhulka hoostiisa iyada oo aan la dhisin ceel weyn oo waalka. Kaliya ceel -gacmeed yar ayaa u baahan in dhulka la dhigo, kaas oo si weyn u badbaadiya kharashka dhismaha iyo waqtiga injineernimada.
7. Dhererka jirka waalka iyo dhererka jirridda waalka waa la hagaajin karaa iyadoo la raacayo shuruudaha dhismaha iyo naqshadaynta dhuumaha.
8. Saxnaanta mashiinka ee goobahu waa mid aad u sax ah, qalliinku waa iftiin, mana jirto faragelin xun.
10. Waxaa jira laba hab oo isku xirka: alxanka iyo flange.
11. Habka hawlgalka: gacanta, marshka (toosan / jiif)
12. Marka la eego xaaladda hawlgalka caadiga ah iyo isticmaalka waalka, muddada dammaanaddu waa 20 sano.
Qaab dhismeedka waalka kubbadda alxanka
1. Waaligu wuxuu qaataa biibiilaha birta birta ah ee bilaa birta ah oo lagu cadaadiyey waalka kubbadda isku dhafan.
2. Jidka waalka wuxuu ka samaysan yahay AISI303 ahama iyo jirka waalka wuxuu ka samaysan yahay AISI304 ahama. Waxaa lagu sameeyaa dhammayska shiididda waxayna leedahay wax -qabad shaabadaysan oo aad u fiican iyo iska -caabbinta daxalka.
3. Xiritaanku wuxuu qaataa kaarboon xoojiyay PTFE giraanta shaabadaynta dabacsan, cadaadiska tabanna wuxuu ku yaal dusha sare, si shaabaddu u leedahay faa'iidooyinka daadinta eber iyo nolosha adeegga dheer.
4. Habka isku xirka waalka: alxanka, dunta, flange, iwm si dadka isticmaala ay u doortaan. Qaabka gudbinta: xamilka, marawaxadaha, sambabada, korontada iyo qaababka gudbinta kale ayaa la qaatay, baddalkuna waa dabacsanaan iyo iftiin.
5. Waalku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka qaab dhismeedka is haysta, culayska fudud, kulaylka fudud ee kulaylka iyo rakibidda fudud. Waalkaan guud ahaan waxaa lagu rakibay si siman.
6. Qalabka isku -dhafan ee isku -dhafan ee isku -dhafan waxaa lagu horumariyaa iyadoo la nuugo tiknoolajiyadda shisheeye oo la isku daro xaaladda dhabta ah ee Shiinaha. Waxaa lagu sameeyaa Shiinaha halkii la soo dejin lahaa si loo buuxiyo farqiga gudaha. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa meelaha dhuunta dhuumaha dheer sida gaaska dabiiciga ah, batroolka, kululaynta, warshadaha kiimikada iyo shabakadda dhuumaha tamarta kuleylka.
Sawirka goobta (1)
Sawirka goobta (2)
“Saddex sahay iyo hal warshadood” ayaa ku habboon in la yareeyo culayska shirkadaha dawladdu leedahay iyo in xoogga la saaro horumarinta meheradaha waaweyn. Waxa kale oo ay ku habboon tahay is -dhexgalka kheyraadka, is -beddelka iyo kor -u -qaadista kaabayaasha iyo sii wanaajinta bay'adda nolosha shaqaalaha. BILOWGA LIKE wuxuu had iyo jeer u hoggaansamaa falsafadda ganacsiga ee "daacadnimada, hal-abuurka, iskaashiga iyo guulaha-guusha", wuxuu isku qaabeeyaa tayada badeecada iyo qanacsanaanta macaamilka, wuxuuna ka sarreeyaa raacdada aan kala go 'lahayn iyo horumar waara.
kabka birta wafer nooca jeeg valve pn16
Daboolista Xeebta: Sawirrada keenaya raacayaasha...
waa maxay jikada casriga ah
Haydarooliga hubinta waalka ilaalinta tamarta...
Aaladaha ugu hal-abuurka badan ee aad ka heli karto f...